Fahababoana tany Asiria - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fahababoana asiriana)
Ny fahababoana tany Asiria na sesitany tany Asiria na fahababoana asiriana dia fotoana teo amin' ny tantaran' i Israely taloha sy i Jodà izay nanaovan' ny Asiriana sesitany olona israelita anarivony avy tao amin' ny Fanjakan' i Israely avaratra (Samaria). Isan' ireo famindràm-ponenana maro izay nataon' ny Empira Asiriana vaovao izany. Ny Fanjakan' i Israely avaratra dia babon' ilay mpanjakan' i Asiria atao hoe Teglatfalasara III (na Tiglato-pilesera) sy i Salmanazara V (Salmanesera). Ny mpanjaka asiriana faramparany, dia i Sargôna II sy ny zanany mpandimby azy Senakeriba, dia tompon' andraikitry ny fiafaran' ny roapolo taona naharava ny Fanjakan' i Israely any avaratra nonenan' ny foko folon' i Israely, na dia tsy afaka nandrava ny Fanjakan' i Jodà any atsimo aza izy ireo. Natao fahirano i Jerosalema nefa tsy azon' ny mpanao fahirano. Ireo foko nataon' i Asiria sesitany no atao hoe "Foko folo very" taty aoriana.
Fanaovan'i Asiria sesitany ny Fanjakan'i Israely avaratra
1.1 Fanaovan-tsesitany voalohany
1.2 Fanaovan-tsesitany faharoa
3 Tsara vakina:
Ny fanaovan-tsesitany dia nanomboka tamin' ny taona 740 tal. J.K. (na 733/2 tal. J.K. araka ny loharano sasany).
Izao no vosoratra ao amin' ny Boky voalohan' ny Tantara:
"Ka namporisihin' ny Andriamanitr' Israely, ny fanahin' i Fola mpanjakan' i Asiria sy ny fanahin' i Telgatfalnasara, dia nentin' ireo babo ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny fokon' i Manase, nentiny nankany Hala sy Habora ary Arà mbamin' ny ony Gozana mandrak' androany." (Ny Baiboly Masina, 1Tant. 5.26)
Izao koa no voasoratra ao amin' ny Boky faharoan' ny Mpanjaka:
"Tamin' ny andron' i Fasea mpanjakan' Israely no nahatongavan' i Teglathfalasara mpanjakan' i Asiria sy nahazoan' io an' i Ajona, Abela-Beta-Makaa, Janoe, Kedesa, Asora, Galaada ary Galileas, dia ny tanin' i Neftalì rehetra, sady nentiny ho babo tany Asiria koa ny mponina.." (Ny Baiboly Masina, 2Mpanj. 15.29)
Tamin' ny taona 722 tal. J.K., tokony ho folo hatramin' ny roapolo taona taorian' ny fanaovan-tsesitany voalohany dia azon' i Sargona II ny renivohitry ny Fanjakan' i Israely avaratra, i Samaria, rehefa natao fahirano nandritra ny telo taona izay natombok' i Salmanazara V.
Izao no voasoratra ao amin' ny Boky faharoan' ny Mpanjaka ny amin' izany:
"3 Niakatra hanafika azy Salmanesera, mpanjakan'i Asyria, ka dia tonga mpanompony nandoa hetra ho azy Hosea. 4 Ary ny mpanjakan'i Asyria nahita fa niodina Hosea; fa efa naniraka olona tany amin'i So, mpanjakan'i Egypta, izy sady tsy nanatitra hetra ho an'ny mpanjakan'i Asyria intsony tahaka ny fanaony isan-taona; koa dia nanidy azy ny mpanjakan'i Asyria sy namatotra azy tao an-trano-maizina. 5 Dia niakatra ny mpanjakan'i Asyria ka nanenika ny tany; ary niakatra tany izy ka nanao fahirano azy telo taona. 6 Ary tamin'ny taona fahasivy nanjakan'i Hosea no nahafahan'ny mpanjakan'i Asyria an'i Samaria, dia nentiny ho babo tany Asyria ny Isiraely ka namponeniny tao Hala sy teo amoron'i Habora (dia ny onin'i Gozana izany) ary teny amin'ny tanànan'ny Mediana." (Ny Baiboly, 2Mpanj. 17.3-6).
"11 Ary ny mpanjakan'i Asyria nitondra ny Isiraely ho babo tany Asyria ka nametraka azy tao Hala sy teo amoron'i Habora, onin'i Gozana, ary teny amin'ny tanànan'ny Mediana, 12 Satria tsy nihaino ny feon'i Jehovah Andriamaniny izy, fa nivadika ny fanekeny, dia izay rehetra nandidian'i Mosesy, mpanompon'i Jehovah, ka tsy nihaino na nankato izany izy." (Ny Baiboly, 2Mpanj. 18.11-12)
Ny teny hoe "tanànan’ ny Mediana" na "tanànan’ ny Meda" resahina eo ambony dia mety fahasimban’ny fanoratana ny andian-teny niaingana hoe "Tendrombohitr’ i Media"  .
Ny Boky faharoan'ny Mpanjaka dia milaza matetika fa ny vahoakan'ny Fanjakan'i Israely manontolo no nentin'ny Asiriana natao sesitany. Ny manampahaizana sasany anefa mihevitra fa ny zavatra voalaza ao amin'ny Boky faharoan'ny Tantara ny amin'ny niafaran'ny Fanjakana avaratra dia mifameno amin'ny fomba samihafa. Ampahatsiahivina matetika ny toko faha-15, izay milaza fa nisy mponina tamin'ny tanàna an-tendrombohitr'i Efraima sy i Manase izay nobaboin'i Asa mpanjakan'i Jodà. Ka i Asa nivahiny tao amin'ny vahoakan'ny Fanjakan'i Jodà, dia niverina mba hanaraka ny finoana hebreo indray. Izany anefa tsy fahaiza-mitantara ny zava-nitranga. Satria ireo soratra ireo dia manambara mazava fa tamin'izany fotoana izany dia mbola tsy nisy nanombinana ny Fanjakana avaratra, izany dia niseho tamin'ny fotoana tany alohan'ny fanaovan'ny Asiriana sesitany ny vahoaka tao amin'ny Fanjakan'i Israely avaratra.
"8 Ary raha ren'i Asa izany teny izany sy ny faminanian'i Odeda mpaminany, dia niezaka izy ka nanaisotra ny sampy fahavetavetana tamin'ny tanin'ny Joda sy ny Benjamina rehetra ary tamin'ny tanàna izay azony tany amin'ny tany havoan'i Efraima, sady nanavao ny alitaran'i Jehovah izay teo anoloan'ny lavarangana fidirana amin'ny tranon'i Jehovah. 9 Ary novoriny ny Joda sy ny Benjamina rehetra sy ny vahiny teo aminy izay avy tany amin'ny Efraima sy ny Manase ary ny Simeona; fa betsaka no nanatona azy avy tamin'ny Isiraely, raha hitany fa Jehovah Andriamaniny no teo aminy. 10 Ary nivory tany Jerosalema ireo tamin'ny volana fahatelo tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folo nanjakan'i Asa." (Ny Baiboly, 2Tant. 15.8-10)
Araka ny Boky faharoan'ny Tantara toko faha-30 dia voaporofo fa fara-faharatsiny nisy olona avy tao amin'ny Fanjakana avaratra izay tsy azon'ny fanaovan-tsesitany. Ny mpanjaka Hezekia (Ezekiasa) dia nanasa azy ireo hankalaza ny Paska tamin'ny fankalazana natao tao Jerosalema niaraka tamin'ny mponin'i Jodà (ny firavoravoana dia nahemotra iray volana aorian'ny daty tokony ho izy).
Nandefa hafatra any amin'ireo sisa tamin'ny Fanjakana avaratra i Hezekia; nihomehezan'ny iraka ny andry tamin'ny fitsidihany ny tanin'i Efraima sy ny an'i Manase ary ny an'i Zebolona. Ny mponin'i Asera sy ny an'i Manase ary ny an'i Zebolona anefa dia naetry (nafaham-baràka) ary matetika tonga tao Jerosalema. Araka ny ampahany farany ao amin'io toko io, na dia ny olona ao amin'ny fokon'i Isakara aza dia tokony handray anjara amin'ny fetin'ny Paska. Misy manampahaizana amin'ny Baiboly toa an'i Umberto Cassudia sy i Elia Samuele Artom izay milaza fa i Hezekia dia mety naka ireo tany ireo ho feheziny ka navelany honina tao ny vahoaka sisa tamin'ny Fanjakan'i Israely.
"Ary Hezekia naniraka tany amin'ny Isiraely sy ny Joda rehetra ka nanoratra taratasy ho amin'ny Efraima sy ny Manase koa mba hankanesany any an-tranon'i Jehovah any Jerosalema hitandrina ny Paska ho an'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely." (Ny Baiboly, 2Tant. 30.1)
"5 Dia nandidy handefa teny eran'ny Isiraely rehetra hatrany Beri-sheba ka hatrany Dana izy mba hankanesan'ny olona hitandrina ny Paska ho an'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, any Jerosalema; fa ny be sy ny maro tsy mba nitandrina azy araka ny voasoratra. 6 Dia lasa ny tsimandoa nitondra ny taratasy avy tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hitety ny Isiraely sy ny Joda rehetra ka nilaza araka ny didin'ny mpanjaka hoe: Ry zanak'isiraely ô, miverena amin'i Jehovah, Andriamanitr'i Abrahama sy Isaka ary Isiraely, mba hiverenany ho amin'izay sisa aminareo izay tsy azon'ny tànan'ireo mpanjakan'i Asyria. 7 Aza manahaka ny rainareo sy ny rahalahinareo izay nivadika tamin'i Jehovah, Andriamanitry ny razany, ka dia natolony ho figagana araka izao hitanareo izao izy. 8 Koa aza manamafy ny hatokareo toy ny nataon'ny razanareo, fa atolory an'i Jehovah ny tananareo, ka midìra ao amin'ny fitoerany masina, izay nohamasininy ho mandrakizay; ary manompoa an'i Jehovah Andriamanitrareo, mba hiala aminareo ny fahatezerany mirehitra. 9 Fa raha miverina amin'i Jehovah ianareo, dia hahazo famindram-po eo anatrehan'izay nitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy; fa miantra sy mamindra fo Jehovah Andriamanitrareo, ary tsy mba hiamboho anareo Izy, raha miverina aminy ianareo." (Ny Baiboly, 2Tant. 30.5-9).
"18 Fa nisy olona betsaka, dia maro avy tamin'ny Efraima sy ny Manase sy ny Isakara ary ny Zebolona, no tsy mba nanadio ny tenany, kanefa nihinana ny Paska ihany izy, fa tsy araka izay voasoratra. Ary Hezekia nivavaka ho an'ireny ka nanao hoe: Jehovah tsara ô, mamelà 19 izay rehetra efa nampiomana ny fony hitady an'Andriamanitra, dia Jehovah, Andriamanitry ny razany, na dia tsy madio araka ny fahadiovan'ny fitoerana masina aza izy." (Ny Baiboly, 2Tant. 30.18-19)
"25 Ary faly ny fiangonana, dia ny Joda rehetra sy ny mpisorona sy ny Levita sy izay rehetra tafangona avy tamin'ny Isiraely mbamin'ny vahiny izay avy tany amin'ny tany Isiraely ary izay nonina tany Joda. 26 Koa nisy fifaliana be tany Jerosalema; fa hatramin'ny andron'i Solomona, zanak'i Davida, mpanjakan'ny Isiraely, dia tsy mbola nisy tahaka izany tany Jerosalema." (2Tant. 30.25-26)
Ao amin'ny Boky faharoan'ny Tantara toko faha-31 dia voalaza fa ny sisa amin'ny Fanjakan'i Israely dia hody, nefa tsy alohan'ny handravana ny toeram-pivavahana amin'ny sampin'ny andriamanitra Baala sy ny andriamani-bavy Asera (na Aseraha) ho tavela ao amin'ny tanin'i Jodà sy ny tanin'i Benjamina sy ny tanin'i Efraima ary ny tanin'i Manase:
"1 Ary nony vita izany rehetra izany, dia niainga nankany an-tanànan'ny Joda ny Isiraely rehetra izay tao ka nanorotoro ny tsangam-baton-tsampy sy nikapa ny Aseraha ary nandrava ny fitoerana avo sy ny alitara eran'i Joda sy Benjamina rehetra ary tany Efraima sy Manase koa ambara-paharavany azy rehetra. Dia samy nody ho any amin'ny taniny sy ny tanànany avy ny Zanak'Isiraely rehetra." (Ny Baiboly, 2Tant. 31.1)
Fanjakan'i Israely any avaratra
Bokin'i Isaia 36.1-22; 37.1-38; 7.1-20; 8.1-23; 9.1-20; 10.1-34; 11.1-16; 17.1-14; 19.21-25; 38.1-22
↑ The Books of Kings and Chronicles modern view by Umberto Cassuto and Elia Samuele Artom (1981)
↑ "Hara", entry by W. Ewing in the International Standard Bible Encyclopedia
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahababoana_tany_Asiria&oldid=1011549"
Dernière modification le 16 Mey 2021, à 10:41
Voaova farany tamin'ny 16 Mey 2021 amin'ny 10:41 ity pejy ity.